Monday December 09, 2019 - 11:28:01 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Sheekha oo 74 sana jir ahaa ayaa ugeeriyooday cuduro uu ka qaaday xabsiyada dadka lagu tacdiibiyo ee wadanka Masar halkaas oo uu muddo sanada ah ku xirnaa.
Barta Sheekha ee Facebook-ga ayay Ardaydiisu ku iclaamiyeen geeridiisa waxaana Janaasada lagula tukaday Masjid kuyaal bariga magaalada Caasimadda ah ee Al Qaahira.
Sheekh Saciid wuxuu kamid ahaa culimada salafiyiinta Masar kuwooda ugu caansan wuxuu lasoo kifaaxay nidaamyadii calmaaniyiinta ee Masar soo maamulayay afartankii sano ee lasoo dhaafay.
Nidaamkii Max'med Xusni Mubaarak ayaa sheekha Xabsi dhigay kadib markii uu ka dhiidhiyay falalka ka dhanka ah diinta islaamka ee ay geysanaysay dowladda Masar, sidoo kale sheekha ayaa kalimadda xaqqa ah ka hor jeedin jiray garsoorayaasha maxaakimta ee qaanuunka wax ku xukuma.
Sheekh Fowzi wuxuu ahaa aas aasihii iyo khadiibkii Masjidka Al Towxiid ee kuyaal xaafadda Ramsiis ee bartamaha magaalada Al Qaahira, sanaddii 2011 wuxuu kamid ahaa culimadii ka qeyb qaadatay kacdoonkii Masar ka dhacay ee lagu riday Mubaarak iyo nidaamkiisi.
Sanaddii 2013 markii uu Alsiisi Inqilaabka ku qabsaday talada Masar ayuu aad uga dhiidhiyay wuxuuna kamid ahaa dadkii abaabulay dibad baxyadii lagu diidanayaa saraakiisha Inqilaabka ee ka dhacay fagaaraha weyn ee Raabicatul Cadawiyah.
Melleteriga Alsiisi ayaa sheekha udhaadhiciyay xabsi dadka lagu tacdiibiyo halkaas oo uu kula kulmay xaalad caafimaad darro balse sanaddii 2016 ayuu sheekhu xuriyaddiisa dib uhelay, intii uu noolaa Sheekh Fowzi Assaciid wuxuu ahaa caalim xaqqa caddeeya oo shareeca doon ah.
Weerar Khasaare dhaliyay oo ka dhacay wadanka Austria.
Weerar dad lagu dilay oo ka dhacay magaalo katirsan wadanka Canada.